Ny Visual Studio Code ve no Editor Code OSX tsara indrindra eny an-tsena?
Sabotsy, Martsa 6, 2021 Zoma, Martsa 5, 2021 Douglas Karr
Isan-kerinandro aho dia mandany fotoana amin'ny namako akaiky, Adam Small. Adam dia mpamorona mahay… namolavola sehatra marketing an-trano iray manontolo izay misy endri-javatra tsy mampino - na dia manampy safidy mivantana aza ho an'ny masoivohony handefa karatra paositra nefa tsy mila mamolavola azy ireo akory! Toa ahy, i Adama dia nivoatra nanerana ny sakan'ny fiteny sy ny sehatr'asa. Mazava ho azy, manao azy matihanina sy isan'andro izy, nefa tsy afaka mivoatra isan-karazany aho
Maninona no ilaina ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala ary ny fomba 5 hampitomboana azy
Talata, Martsa 17, 2020 Alakamisy 19 martsa 2020 Katherine Horne
Efa nilavo lefona tamina pejin-tranonkala iray miadana miadana ianao, manindry ny bokotra aoriana mba hahitanao ny vaovao tadiavinao any an-kafa? Mazava ho azy fa manana ianao; samy manana amin'ny fotoana iray na hafa ny tsirairay. Rehefa dinihina tokoa, ny 25% amintsika dia handao pejy iray raha tsy nitazona tao anatin'ny efatra segondra (ary miakatra ihany ny fanantenana rehefa mandeha ny fotoana). Saingy tsy izany ihany no antony maha-zava-dehibe ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala. Ny laharana Google dia mihevitra ny zava-bitan'ny tranokalanao sy
Alarobia, Desambra 5, 2018 Alarobia, Desambra 5, 2018 Roma Kapadiya